5% Discount For Room Price
5% Discount For Room Price အသေးစိတ်
နေ့နေ့ ညည သာယာလှပပြီး သဘာဝရဲ့အရသာကို အပြည့်အဝခံစားနိုင်စေမယ့် လွိုင်ကော်မြို့လေးသို့ အလည်တစ်ခေါက်သွားပြီး ပြီးပြည့်စုံလှတဲ့ Famous Hotel ကြီးရဲ့ 5% Discount နဲ့အတူ Rest ယူကြရအောင်ဗျာ ….
ကြည့်လိုက်ရုံနဲ့တင် တည်းခိုချင်စရာကောင်းတဲ့ Famous Hotel ကြီးက အမြင်နဲ့တင်မဟုတ်ပဲ တစ်ခါတည်းဖူးရုံနဲ့တင် အရမ်းကို စိတ်ကျေနပ်စရာကောင်းမှာအသေအချာပါပဲ … သက်တောင့်သက်သာ လွန်စွာမှ ရှိလှတဲ့အပြင် လှိုင်ကော် မြို့မှာ တည်းခိုဖို့အတွက် အသင့်တော်ဆုံး Hotel ကြီးတွေထဲက တစ်ခုဆိုလည်းမမှားပါဘူး …
Hotel ရဲ့ Reception ကအစ Customer Service အပြည့်အဝပေးနိုင်ရုံသာမကပဲ Hotel အခန်းတစ်ခန်းချင်းဆီကလည်း Comfortable ဖြစ်လှတာကြောင့် တည်းခိုဖူးသူတိုင်းရဲ့ Recommend အပေးခံရဆုံး Hotel တစ်ခုပါ … လွိုင်ကော်မြို့ရဲ့ အထင်ကရဖြစ်တဲ့ နောင်ရန်ကန် ရဲ့အနီးနားမှာရှိပြီး တစ်မိနစ်လောက် သွားလိုက်တာနဲ့တင် တောင်ကွဲစေတီကို သွားရောက်ဖူးမျှော်နိုင်ပါသေးတယ်။
အခုလိုအားသာချက်တွေရှိနေတဲ့ Famous Hotel ကြီးမှာ Buffet Breakfast , Laundry Service , Spacious Car Parking , Free Wifi အစရှိတဲ့ Service & Facilities တွေအပြည့်အဝကို ခံစားပြီး 5% Discount နှင့်အတူ ပျော်ရွှင်စွာ တည်းခိုနိုင်ဖို့ဆိုရင်တော့ Walk-in ဝင်တဲ့အချိန်မှာ B&F Club Card လေးကို ပြလိုက်ရုံပါပဲနော် ….
ဒါဆိုအခုလို ပွင့်လင်းရာသီလေးမှာ လွိုင်ကော်သွားဖို့ စဉ်းစားနေတယ်ဆိုရင်တော့ စိတ်ပျော်ရွှင်မှုအပြည့်အဝပေးစွမ်နိုင်မယ့် Famous Hotel ကြီးကိုသာ ရွေးချယ်လိုက်ပါလို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေ ….
Address – No.116/A Thu Du Nu Street, Daw Ou Khu Ward, Loikaw, Kayah State.
Ph Number – 09 83 2224200, 2224199
Promotions Period - 17.Oct. 2019 - 17. Apr. 2020
12 months - 12000 ks
15% Discount for Sunday Brunch Or Buffet Dinner on Saturday night
Sule CaféEach day offersaunique buffet item and it will cost USD$ 38net. if Sunday Brunch includes